Nchịkọta Gabrielle Union Maka New York & Islọ ọrụ Bụ Boss-Chic Bomb!
Ọ bụ Ihe niile gbasara ịgba ọkụ ka Andrea Iyamah na-ewepụta mmiri mmiri ya mmiri
Gabrielle Union bụ ihu nke 7th Avenue Studio Line. Ọtụtụ ndị na-eme ihe nkiri na-emeri n'ọsọ ahụ abanyela n'ụdị ejiji oge niile wee gbaba n'ime ya n'oge ọ ga - ezumike. Nchịkọta ya na nso nso a na ijikọ aka na New York & Companylọ ọrụ Ejiri ọtụtụ nke ụdị ya nwere ọtụtụ dusters, uwe ndị mara mma, jumpsuits, rompers na ogologo ọkpa.
Wezụga iberibe ndị ahụ dị mfe ma mara mma, eriri Gabrielle Union agbatịala nha site na XS - XXXL nke dị oke mma ebe enwere ọtụtụ ụmụ nwanyị nọ n'ọtụtụ gbakwunye ga-achọ ịdị ka gal kachasị amasị ha. Gabrielle.
Maka onye na-eme ihe nkiri, inwe ike ịmepụta nchịkọta dị egwu dị otú a na oke nke dị elu karịa 8 bụ akụkụ dị mkpa nke usoro okike ahụ. Ọ dị mkpa nye ya na iberibe ahụ dịka o kwere omume anyị ga-enyefe ya onye na-eme ihe nkiri maka iguzosi ike n'ihe o kwenyere na ya.
Gabrielle Union's Nchịkọta New York na Companylọ ọrụ gụnyere ngwakọta eclectic nke ụdị ejiji dị elu, iberibe uwe na enweghị mgbalị, yana ụdị mbinye aka dị n'okporo ụzọ savvy wears.
Lee ihe nlere anya na nnabata egosi Gabrielle Union dika ihe nlere…
Mara mma, nri? Onu ogugu a site na mkpokọta @gabunion abiala ugbua na stores #AllTo Tare
A post na-akọrọ site New York & Companylọ ọrụ (@nyandcompany) na Feb 3, 2018 na 2: 22pm PST
Ebe E Si Nweta Foto: Gabunion & Nyandcompany
Celebrities ememme ịke 2018 Apụta Gabrielle Union gabrielle union new york na co ndị na-eme ememme kachasị ọhụrụ ụlọ ọrụ york ọhụrụ